चितवनमा क्यामेरा लिएर पुगेका युट्युबरलाई स्थानीयले लखेटे ! – List Khabar
Home / समाचार / चितवनमा क्यामेरा लिएर पुगेका युट्युबरलाई स्थानीयले लखेटे !
admin4weeks ago समाचार Leaveacomment 113 Views
घ’टनाक्रमलाई अ’तिरञ्तिज पार्न आएको भन्दै चितवनमा एक युट्युव क’न्टेन्ट क्रि’यटर (युट्युबर) लखेटिएका छन्। पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका ब्र’म्हस्थानी सामुदायिक वनको जंगलमा क्यामेरा लिएर पुगेका युट्युबर भोजराज थापालाई स्थानीयले लखेटेका हुन।
सुजिता असार ११ गतेदेखि ह’राइरहेकी थिइन् । असार ११ गते बिहान ६ बजे साथीको घर जाने भनेर हिँडेकी सुजिता सोही दिनदेखि वे’पत्ता भएकी थिइन् ।जङ्गलमा च्याउ टि’प्न गएका स्थानीयवासीहरुले आइतबार साँझ श’व देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
वनको बीचमा एउटा झा’ङमा अ’ड्किएको अवस्थामा उनको श’व फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । श’व ग’लेको अवस्थामा फेला परेको छ ।शो श’व र घ’टनाको भिडिओ बनाउन गएका युट्युव क’न्टेन्ट क्रि’यटर भोजराज थापालाई स्थानियले अ’पशब्द प्रयोग गरेका थिए।
भिडिओ नखिच्न र तत्काल घ’टनास्थल छो’ड्न उनलाई स्थानीयले द’बाब दिएका थिए। पछिल्लो समय युट्युबरहरुले घटनाहरुलाई अ’तिरन्जित पा’र्ने गरेको आरोप छ। राप्ती नगरपालिका–३ की सुजिता भण्डारीको श’व भेटिएपछि आज दिनभर नगरपालिका स्थित राजमार्ग क्षेत्र त’नावग्र’स्त रह्यो ।
जंगलमा मृ’त अवस्थामा फेला परेकी २३ वर्षीया सुजिता भण्डारीको श’व उ’ठाएर पो’ष्ट’मा’ट’मका लागि प्रहरीले अस्पताल लै’जाँदै गर्दा स्थानीयले श’वलाई रो’केका थिए ।ह’राएको १० दिनसम्म पनि प्रहरीले घ’टनाबारे केही अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयहरु प्रहरी प्रशासनवि’रुद्ध ना’राबाजी गर्दै पूर्वपश्चिम राजमार्ग अ’वरुद्ध गराएका हुन् ।
स्थानीय र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सरोकारवाला बीच भएको वार्तापछि दुई बुँदे सहमति भएको छ । मृ’त’कको श’व पो’स्ट’मा’ट’म गर्ने, घटनाको निष्पक्ष छा’नविन गर्ने र प’रिवारलाई रा’हतका लागि सरकारसँग सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिपछि अहिले राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ ।स्थानीयले बिहान ९ बजेदेखि ४ बजेसम्म राजमार्ग अ’वरुद्ध गराएका थिए ।भिडियो खिच्नका लागि भोजर्राज थापाको साथमा जिबन पाण्डे लगाएत अन्य युट्युबर समेत चितवन पुगेका थिए
Previous सेनाको हेलिकप्टरबाट गर्भवतीको उद्धार
Next ‘साला र भाइलाई थु’नेको हुँ, भ’नसुन र पा’वर चल्दैन’: एसपी कार्की